Iifashthi zeBhinqa elincinci
Phantse onke amabhinqa acinga ukuba umlinganiselo wakhe akafezekanga kwaye uzalisekile. Yaye yena, ewe, uzama ukuwafihla zonke iindlela. Kodwa ngaba bekungekho ngcono ukugxininisa ubuchule obukhoyo bakho bomfanekiso? Oku kunokwenziwa ngokulula ngoncedo lweempahla ezikhethiweyo. Kule nqaku siya kuthetha malunga nendlela yokukhetha iimpahla zowesifazane omncinci.
Wonke umfazi ophantsi uthanda ukubheka ubude, obuncinane kakhulu, obuhle kakhulu. Njengokuba yonke i-brunette ingathanda ukuba yi-blonde. Kodwa akukho sizathu sokukholelwa ukuba abadekazi bahlala bexhepha kwaye banomtsalane kunabesifazane abaselula. Naliphi na intombazana encinci inokuba yinto enqabileyo kwaye inqwenelekayo.
Ukuqonda iimpahla ezincedisayo ukuba uncede umfazi omncinci enze ukulingana komzimba wakhe, kufuneka ukwazi imithetho ethile. Umzekelo, izambatho ezinemibala ebonakalayo zenze umfazi ophantsi aphezulu. Oku, akunjalo, akuthethi ukuba kufuneka agqoke iingubo ezimhlophe, ii-T-shirts kunye ne-sweaters. Ukwelula ngokubonakalayo umgca awukwazi nje kuphela imivimbo ebonakalayo, kodwa kunye nemigca ecacileyo yeeqhosha, iziqu kunye nezixhobo ezilula ezilula. Ukukhethwa kwimizekelo yefowuni enkulu kakhulu. Unako ukhetha ukukhetha enye efanelekileyo ngakumbi kuwe.
Izinto nge-V-intamo kufuneka zibe yingxenye ebalulekileyo yengubo yakho yokugqoka, ukuba ufutshane. I-decollete ye-Triangular ingakwandisa ngokukhawuleza i-silhouette yakho kwaye igxininise amabele akho. Kodwa oku akuthethi ukuba ibhinqa elincinci alikwazi ukugqoka izinto nabanye - iinqwelo ezijikelezayo okanye zesikwere. Ziyakwazi ukudibaniswa nemidulo ende, ukukhupha i-silhouette.
Omnye umgaqo obalulekileyo kukukhethwa kweengubo zembala emnyama. Nangona kunjalo, umntu akufanele acinge ukuba iimpahla eziphathekayo ngefestile eqaqambileyo azifanelanga abafazi abancinci. Ukuqwalasela umlinganiselo, unxiba nayiphi na impahla. Xa ukhetha iingubo kunye nomzekelo, qaphela ubungakanani bayo. Ukuba umfanekiso ukhulu kunombindi wakho, ngoko unokugqoka ngokukhawuleza iingubo zokugqoka okanye izitulo. Baza kujonga ngokuvisisanayo. Ukuba ubukhulu bomfanekiso bugqithise ubukhulu bentonga yakho, ngoko ke wenqaba ukuthenga into enjalo.
Musa ukufihla imilenze yakho ekugqibeleni amehlo. Abafazi abancinci akufuneki bembethe iingubo ezide emgangathweni. Oku akubenzi ukuba baphakame, kodwa bawutye nje ngokukhula okuphantsi. Kuwe, iengubo eziya emadolweni okanye nakwi mini ziya kuba zilungele. Ingakumbi kukho indawo evulekileyo emzimbeni wakho (kuphela kwisizathu), ophezulu uya kubonakala.
Izambatho zangaphandle kufuneka zibe nemikhono emide. Oku kuya kwenza ukuba izandla zakho zilungiswe kangangoko, zibukeke zibonakala. Kodwa musa ukuyidlula. Umkhono omude kakhulu uya kuguqula umfanekiso wakho ungabonakali, kodwa umhle. Ukuba umkhono omude uyakuphazamisa, ke kungcono ukunikela ngokupheleleyo. Okokuqala, iimpahla kufuneka zikhululekile.
Ncinane malunga nezicathulo
Izambatho ezikhethiweyo ngokufanelekileyo - azinjalo. Akufanele sikhohlwe ukuba zininzi izambatho kuthetha ntoni ekudaleni umfanekiso. Umgaqo oyintloko wowesifazane omncinci ubukho bentendelezo. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezamkelekileyo. Ukukhetha izicathulo, kungcono ukunika izicathulo ezibukhali, kungekudala. Izicathulo okanye izicathulo ezinemivu evulekile zifanelekileyo. Ukukhetha izihluthulelo, kufuneka kunikwe ingqalelo ekhethekileyo ekuphakameni kwawo. Umfazi osemyingeni, ukuphakama okuphakathi kwezibhotshi kulungile. Ekubeni iibhothi eziphantsi zibukeka zenza imilenze yakho ibe mfutshane, kwaye phezulu kakhulu ayiyi kuba yinto efanelekileyo.
Ukukhetha iingubo ngohlobo lohlobo
Njengomthetho, phakathi kokukhula okuncinci kwabasetyhini, kukho iintlobo ezintathu eziphambili zeempawu: ezicacileyo, eziphilileyo kunye neengqungquthela zeengqungquthela. Ibhinqa elinomfanekiso wohlobo lweenkcazo ezichanekileyo ziya kuhambelana neempahla zendlela eziqhelekileyo kunye nezitayela. Abasetyhini abanomntu onjalo banokukwazi ukugqoka iikhati, bekhwele kwisiketi okanye ngeebhulukhwe, kunye ne-blouse enebhande elincinci.
Kwintombazana enomfanekiso wesigcawu se-canonical, iimpahla ezininzi ezifanelekileyo ziya kubonakala zikhulu. Kuya kubakho ukuchaphazeleka kungekhona nje kuphela, kodwa kumanzi amaninzi, ngokuzimela ngokukhululekileyo ezinqeni.
Abasetyhini abanomfanekiso wohlobo lweempapasho ezibukhali bafanelwe iimpahla ezifanelekileyo. Bakwazi ukugqoka iigebethi ezichanekileyo, kungcono xa bengabikho. Oku kuya kuvumela umfazi ukuba ambonise umlenze onqabileyo.
Ukuze uhlale ubheka imodeli kwaye usebenza kakuhle, udinga, ngaphezu kokulandela imithetho, ukuzithanda wena nokubonakala kwakho. Emva koko, wenza umfazi omncinci. Kwahluke kwiinkoliso ezininzi, ininzi kakhulu, iphupha lomntu.
Izicathulo ezingcono kakhulu zentwasahlobo ka-2010
Ukulungeleka njani ukugqoka kwintombazana epheleleyo?
Unamathela kwi-Selfie: uthando okanye unzondo?
I-Pasta eneentsholongwane ezintsha
Nantsi oku! Ngenxa yentombi yakhe, u-Anastasia Volochkova waguqula ubomi bakhe
Ubuluhlaza okwesibhakabhaka: iqoqo lokuhlobisa iMAC Blue Nectar 2016
UDmitry Peskov watsho isizathu sokuba alele kwiimeko ezibalulekileyo
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo yekyanite
Ngaba abantwana banokuba ne-caviar ebomvu?
Indlela yokulungiselela umntwana ukugonywa?
Izibane ze Quartz ekhaya